काठमाडौंमा एक तले घर बनाउँदा कति खर्च लाग्छ ? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /Tips/काठमाडौंमा एक तले घर बनाउँदा कति खर्च लाग्छ ?
के तपाईं काठमाडौंमा घर बनाउँदै हुनुहुन्छ ? निर्माण सुरु गर्नुअघि तपाईंले अनुमानित बजेट जोहो गर्नु आवश्यक हुन्छ । आफूसँग कति रकम छ, अपुग रकम बैंकबाट ऋण लिने हो कि आफन्तसँग सरसापट माग्ने हो, त्यो निक्र्योल गर्नैपर्छ ।हामीले तपाईंहरूलाई काठमाडौं उपत्यकामा मध्यम खालको एक तला घर निर्माणका लागि कति रकम खर्च हुन्छ भनेर जानकारी गराउँदै छौं ।
तीन आना (करिब १ हजार स्क्वायर फिट) जग्गामा प्रतिस्क्वायर फिट ४ हजारको दरले एक तला घर ठड्याउन ४०/४२ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । यदि बंगालो किसिमको अलि लक्जरी घर बनाउन खोजे प्रतिस्क्वायर फिट ४५ सयका दरले एक तलाको ४५ लाख रुपैयाँ लगानी लाग्ने भयो ।कस्तो घर बनाउने ? यो तपाईंकै छनोट हो । तपाईंले आफ्नो आयस्रोत हेरेर कस्तो घर बनाउने निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ ।